Ipfupi biography yePío Baroja | Zvazvino Zvinyorwa
Ipfupi biography yaPío Baroja
Carmen Guillen | | Vanyori
Pio Baroja akaberekerwa muSan Sebastián muna 1872 y akafa muMadrid muna 1956. Zita rake rakazara raive Pío Baroja naNessi (Aive nerimwe remazita asingakanganwike).
Ndinodzidza mushonga kuMadrid neValencia, chimwe chinhu chakange chine chekuita nemabhuku uye chakamuti fundo yake yechiremba "Marwadzo, psychophysical kudzidza". Mamwe emabasa ake mabhuku asati aitwa aiita semubiki pamwe nemukoma wake mubhekari remhuri uye makore maviri sachiremba kuGuipúzcoa.
Shamwari yake yekutanga yakanangana nenyika yekunyora yaive AzorinKubva paakatanga hushamwari uhu, anoisa nguva yake yekunyora nekunyora mune zvakawandisa.
Icho chokwadi chekuti aive mufambi mukuru chakamupa maonero akanyatso kuvhurika pane zvaaifarira uye nekushanda mumabhuku. Akashanyira maguta akawanda muSpain neEurope, Paris iri imwe yenzvimbo dzinonyanya kushanyirwa nemunyori wechiSpanish. Ne kutanga kwe Civil War, Pío Baroja anosarudza kurongedza mabhegi ake ndokuisa yakasungirwa kuFrance kubva kwaakadzokera muna 1940.
Avo vaimuziva vakati munyori weBasque aive nezvakawanda introvert. Ainyara uyezve neimwe nzira shurikirwa, pamwe chikonzero nei pasina rudo rwepamutemo rwaizivikanwa kwaari.
1 Zvinyorwa zvechizvarwa che '98
2 Hunhu hwebasa raPío Baroja
3 Mamwe ezvinyorwa zvake zvekunyora
4 Mitsara uye akakurumbira makotesheni naPío Baroja
Zvinyorwa zvechizvarwa che '98
Waive munyori ane hunyanzvisezvo akanyora whopping anopfuura makumi matanhatu enganonyorwa (mamwe trilogies) uye dzakawanda nyaya. Akanyora pamhando dzese dzemisoro: kubva mune zvinyorwa, nhoroondo, nhetembo, theatre, nhoroondo uye kunyange memoir mabhuku.
Kana tikaenda zvakatowanda mumabhuku ake, tinogona kupatsanura basa rake rekunyora muzvikamu zvitatu zvakasiyana:
Kutanga danho: Inovhara kubva 1900 kusvika 1914. Pakati peaya makore gumi nemana, Baroja akanyora emamiririri emamiririri ezera ramakore makumi mapfumbamwe nemasere "Nyika yeBasque", rakagadzirwa nemanoveli "Imba yaAizgorri", "El mayorazgo de Labraz" y "Zalacaín mushanyi"; imwe trilogy yaive "Hupenyu hunonakidza" kwatinowana zvinyorwa "Adventures, zvigadzirwa uye zvakavanzika zvaSilvestre Paradox", "Nzira yekukwana" y "Paradox, mambo"; imwezve yakatumidzwa zita "Kurwira hupenyu" iyo inosanganisa imwe yenhau dzinozivikanwa kwazvo dzeBaroja, "Kutsvaga" pamwe chete "Sora rakaipa" y "Red Aurora". Yekupedzisira trilogies yake kubva panguva yekutanga iyi yaive "Mujaho" yakagadzirwa ne "Muti Wezivo", "Mukadzi Anodzungaira" y "Guta remhute". Mamwe mabasa anozivikanwa atinogona kusanganisira padanho iri aive "Kesari kana hapana", "Zvinonetsa Shanti Andía" y "Nyika iriko".
Chikamu chechipiri: Inoenderana nemakore pakati pe1914 kusvika zviuru gumi. Muchikamu chechipiri ichi tinogona kuwana bhuku rakanzi "Hunhu husina kutsarukana" uye matatu enganonyorwa ina akarongwa pasi pemusoro we "Gungwa", chii, "Iyo labyrinth yemasairini", "Vatyairi vehurefu" y "Nyeredzi yaCaptain Chimista". Muchikamu chechipiri ichi tinogona kuwana pamusoro pezvose nhoroondo mabasa sezvazviri muunganidzwa wemakumi maviri nemaviri enoverengeka anozivikanwa se "Zviyeuchidzo zveMurume Wekuita" yakanyorwa pakati pa1913 na1935.
Chikamu chechitatu: Kubva mugore ra1936, Baroja anotambura neimwe kuderera kwezvinyorwa uye iye anongoisa chete kunyora kwake kumamemoir ake, ayo aigara zvese 7 mavhoriyamu inozivikanwa se "Kubva pamakumbo ekupedzisira", yakanyorwa kubva muna 1944 kusvika muna 1949.
Hunhu hwebasa raPío Baroja
YaPío Baroja tinogona kutaura kuti hunhu uhu hunowanzoitika mune angangoita mabasa ake ese:
Kutsetsenura kwe hunhu kugadzira.
Kufara kwakanaka uye mamiriro evatambi mukukura kwega kwega kwemabasa.
Zvakajairika chinhu mune angangoita ese mabasa ake: iyo kusarongeka kwemaitiro avo. Ivo vangangoita nguva dzose vasina kubatana vanorwira uye kupandukira izvo zvavaifanira kurarama, shanduko munharaunda, nezvimwe. Ivo vatambi "vaneta nekugara" uye vasina tariro.
Anozivisa mumabhuku ake iyo chokwadi chenguva (Iyi poindi yakajairika kune vese vanyori vechizvarwa che98).
Zvinyorwa zvake zvakagadzirwa ne mitsara mipfupi, mazwi akapusa, isina zvishongo zvakawandisa, ...
Zvake novelas vanga vakawandisa chaichoicho uye chinangwa chakanyanya. Kunyangwe zvakadaro, rondedzero yaro yaive yakavhurika uye yakapatsanuka, yakawanikwa pamusoro pezvose nhaurirano dzevanyori vayo.
Mumabasa ake tinogona kuwana adventures, anecdotes, madingindira efilosofi uyewo kwepfungwa.
Mamwe ezvinyorwa zvake zvekunyora
Pazasi iwe unogona kuverenga chidimbu chipfupi chebasa rake "Vechidiki, kuzvikudza", rakabudiswa muna 1917:
"Mumabhuku angu, semumabhuku angangoita ese echimanjemanje, kune hutsi hwekupokana nehupenyu uye nevanhu ...
Iyo yekutanga yagara iri nzvimbo yakajairika yevazivi. Hupenyu hauna musoro, hupenyu hwakaoma kugaya, hupenyu hwakafanana nechirwere, vazhinji vazivi vakati.
Ndine chokwadi chekuti hupenyu hauna kunaka kana kushata, hwakafanana neChisikigo: zvinodikanwa. Nzanga imwechete haina kunaka kana kushata. Zvakaipa kumunhu anonyanyisa kufunga nezvenguva yake; zvakanaka kune avo vanoenderana nharaunda.
Munhu mutema anogona kuenda asina kupfeka kuburikidza nesango uko donhwe rega rega remvura rakaisirwa mamirioni ehutachiona hwemarariya, uko kune zvipembenene zvine kuruma kunokwidza mamota uye uko tembiricha inokwira kusvika pamadhigiri anodarika makumi mashanu mumumvuri.
MuEuropean, ajairira hupenyu hwakachengetedzwa hweguta, zvisati zvaitika senge tropiki, isina nzira yekudzivirira, yaigona kufa.
Munhu anofanira kuve nehunyoro hwaanoda panguva yake uye nharaunda yake; kana uine zvishoma, uchararama semudiki; kana aine zvinodiwa, achararama semunhu mukuru; kana ane zvakawanda, acharwara ”.
Mitsara uye akakurumbira makotesheni naPío Baroja
Tevere, iwe unogona kuverenga mitsara uye makotesheni akataurwa naPío Baroja, uyo aive asina bvudzi parurimi rwake kana zvasvika pakutaura zvakajeka uye mutongo (ndinomurumbidza):
"Mapenzi chete ane shamwari zhinji. Shamwari zhinji kwazvo dzinoratidzira mwero wakakwirira pane iyo dynamometer yeupenzi ”.
“Chokwadi hachiwedzerwe. Muchokwadi hakugone kuve nema nuances. Mune semi-chokwadi kana mukunyepa, vazhinji ”.
Kujekesa musainzi kunodiwa; asi mumabhuku, kwete. Kuona zvakajeka huzivi. Kuona zvakajeka mune zvakavanzika mabhuku. Ndo zvakaitwa naShakespeare, Cervantes, Dickens, Dostoiewski… ”.
"Psychoanalysis ndiyo cubism yemushonga."
"Ndinotenda kuti vanhu, pavanenge vakangwara uye vakajairika, havafanirwe kunyepedzera kuva vasinganzwisisike uye vasinganzwisisike, nekuti vanosvika pane zvisina musoro."
“Kana iwe ukawana chero mutemo, chenjera uye usayedze kuushandisa. Akawana mutemo… wakwana. Nekuti kana mutemo uyu uri wemuviri uye ukaedza kuushandisa mumushini, unogumburwa nenyaya mbishi; uye kana uri mutemo wemagariro, unosangana nehutsinye hwevanhu ”.
“Chaizvoizvo, handizive kana neruramisiro kana kwete, handifarire kugona, nekuti unoona kuti kune varume vazhinji vane hunyanzvi munyika. Kana kundishamisa kuti kune vanhu vane ndangariro, zvisinei hazvo kuti zvikuru sei uye zvichishamisa, kana kuti kune macalculator. Chinonyanya kundishamisa kunaka, uye ndinotaura izvi ndisina kana unyengeri.
“Mabhuku haakwanise kuratidza zvese zvakasviba muhupenyu. Chikonzero chikuru ndechekuti zvinyorwa zvinosarudza uye hupenyu haudi ”.
“Nyika, kwatiri, inomiririra, sekutaura kwaSchopenhauer; hachisi chokwadi chakazara, asi kuratidzwa kwemazano akakosha ”.
"Kana wakura, unofarira kuverenga zvekare kupfuura kuverenga."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Ipfupi biography yaPío Baroja
muna 1872 - 1956
Vanyori vasina kumbohwina Mubayiro weNobel weMabhuku
Mabhuku gumi nematanhatu Ernest Hemingway akakurudzira kune munyori wechidiki muna 16